Ny fanamainana volo BLDC dia maneho ny toe-tsaina fiainana
Satria manokatra ny toe-javatra eo amin'ny tsena sinoa ny mpanam-bolo lafo vidy Dyson, ny marika isan-karazany dia manimbolo ny fahafaha-manao orinasa ary nilatsaka toy ny Panasonic, TESCOM, marika vahiny Philips, dia manana marika eo an-toerana ihany koa, toy ny Zhibai, Dream sns. Mitrandraka tsena fanamainana volo lafo vidy, gradua ...
Manoro hevitra ny mpanitsy volo vaovao – Ianao vy fisaka tena ilaina indrindra!
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-09-24
Ny mpanitsy volo sy ny fanamainana volo dia fitaovana hatsaran-tarehy volo mahazatra ankehitriny. Mihamaro ny olona mampiasa an'io fitaovana roa io hanamboarana fomba sy fikolokoloana volo. Ny matihanin'ny orinasanay dia mamokatra ireo vokatra roa ireo. Araka ny fitakian'ny mpanjifa, ny orinasanay dia mamokatra volo fanitsiana volo vaovao. Eto aho ...
Ny rano ozonisialy ho solon'ny famonoana otrikaina azo avy amin'ny alikaola
Ny gazy Ozone (O3) dia mety ho hitan'ny mpahay simia holandey (van Marum) voalohany, fa ny fandalinana voalohany natao dia nataon'i Christian Friedrich Schönbein tamin'ny taona 1840. Nomarihiny ny fofona mampiavaka ny manodidina ny herinaratra iray ary nomeny anarana ny gazy mifototra amin'ny teny grika "Ozein" (hanitra). Ozone dia mpamokatra ...
Ahoana ny fanesorana ny vodin-tsofina?
Aza manandrana manongotra azy Aza manandrana mikaroka ny vodin-tsofina be loatra na mihamafy amin'ny zavatra misy, toy ny tapa-taratasy, ny landihazo na ny volo. Azonao atao ny manosika ny savoka lavitra mankany amin'ny sofinao ary manimba fahasimbana ny firakon'ny lakandranon'ny sofinao na ny sofina. Ny fomba tsara indrindra hanesorana ireo ...
Inona no manampy amin'ny enema kafe? 1. Ny kafeinina dia manentana ny tsiambaratelon'ny glutathione, ny anzima manan-danja indrindra amin'ny famonoana ny aty sy ny famongorana ireo radikaly afaka. 2. Ny caffeine sy theofylline ao anaty kafe dia manitatra ny lalan-dra ao amin'ny rindrin'ny tsinay ary manamaivana ny enteritis. 3. Ny ...
Inona no mahatonga ny fanamainana volo tena tsara?
Fanamainam-bolo tsara indrindra ho an'ny blowout mora sy mora ao an-trano Ny lakilen'ny volo tsara tarehy sy haavo isan'andro dia fanamainana volo tsara ho an'ny fipoahana mora foana ao an-trano. Ny Beauty Lab dia manombana ny fanamainana volo manerana ny isa vidiny ao amin'ny Lab amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny hafainganam-pandehan'ny fanamainana ny santionan'ny volo namboarina, ny herin'ny rivotra, ny lanja ...